Iimpawu, ukulima kunye nokubaluleka kweefreyimu zikaloliwe | Ngeentlanzi
Iitreyini zikaloliwe zii-mollusks zaziwa kakuhle ngencasa yazo emnandi. Kuthathelwa ingqalelo njengokutya kwabo banako ukuyifumana. Ezi zii-bivalve ezihlala emanzini amatsha kwaye zineempawu ezahlulahlula kwiimbumbulu zolwandle. Kule nqaku siza kukuxelela yonke into enxulumene nale ntlobo.
Ngaba uyafuna ukwazi ukuba kutheni amaxabiso aphezulu kakhulu kwaye zeziphi ezona zinto zibalulekileyo? Funda ukuze ufumane.
2 Ukulinywa kweefreyimu zikaloliwe
3 Iimfuneko kulimo
4 Iipropathi ezifanelekileyo
Iigobolondo zekram kaloliwe zinzima kwaye zenziwe ngecalcium carbonate. Umphezulu wembaza sinokuyifumana iiradiyo kunye nelayini zeradial ezibenza bahluke kwezinye iintlobo zembaza. Kukho iinxalenye zeqokobhe apho imigca ivakaliswa khona kwaye xa bewela omnye komnye banika iigridi. Ezi mpawu zibenza bahluke ngokugqibeleleyo kwezinye iimbaza.
Njengoko sibonile kwamanye amanqaku, uhlobo ngalunye lunento eyahlukileyo eyenza ukuba ikhetheke kwaye yahluke kwezinye. Ukuba siyayithelekisa nomphezulu weslamy clam, siyabona ukuba igudile kakhulu. Kuyo asinako ukwahlula izithethi kakuhle nakwiikhilamu zikaloliwe.
Kwezinye iintlobo zembaza sifumana i-clams enevalval valves. Nangona kunjalo, amaphetshana eefreyimu zikaloliwe ajikeleziwe kwaye aneligament eyenziwe yiprotein eneempawu ezolukiweyo. Iyaziwa njengoluhlobo lwamazinyo kunye namajelo enza ukuba ezi zivalo zisuke phezulu ziye kwiqokobhe elisezantsi ukuze umzimba wembaza ungashiywa ubhencekile engozini.
Nangona zineempawu zezinye iimbaza, iqokobhe lincinci. Inesiqhuma esiqhelekileyo kwindawo engasemva ebizwa ngokuba yi-umbo. Ngokombala, yahlukile kwezinye iiflam. Ngokubanzi, nayiphi na imbaza inombala osusela kwimbala ongwevu mnyama ukuya kwelingwevu kakhulu kunamabala amdaka. Nangona kunjalo, iifreyimu zikaloliwe zinombala ofana nekhrimu. Ingathi ngumbala ophakathi komthubi namdaka. Ikwanazo neempawu ezimnyama.
Ukulinywa kweefreyimu zikaloliwe
Ukutya oku kumnandi, iipaki zasemanzini ezisetyenziswayo apho kulinywa khona iifreyimu zikaloliwe. Ukulima kwenziwa ngeendlela ezahlukeneyo. Abapaki bangahamba ngeenyawo beqokelela i-clams okanye banokusebenzisa isikhephe ukuba inani likhulu kakhulu.
Ukuqokelela i-rake ekhethekileyo isetyenzisiweyo ekwaziyo ukususa isanti emazantsi kunye nokuqokelela i-bivalve emnandi. Iharaki ineengcebiso ezahlulwe ukuze zikhethe ezo zikubungakanani obuhle ukuba zithathelwe ingqalelo njengabantu abadala. Ngumsebenzi wesiko oneminyaka engaphezu kwama-500 yembali kwaye uyaqhubeka ngokuhamba kwexesha. Oku kungenxa yenkcubeko ezuzwe njengelifa ukusuka kwisizukulwana kuye kwisizukulwana, kunye nemveliso yayo ephezulu.
Iingcali azijonganga kuphela ukuhambisa amava kulimo lwee-clams zakwaloliwe, kodwa kunye nothando kunye nobungcali ekufuneka yenziwe. Nangona kubonakala ngathi yinto enobugcisa kwaye ibuye umva ngexesha, okwangoku Iintsapho ezingama-650 zihlala zibulela ukulinywa kweefreyimu zikaloliwe.
Abanini bepaki bakwamele enye yeenkqubo zokuqala zoqoqosho ze IVilagarcía de Arousa. Kwaye le clam ithathwa njengeyona ibiza kakhulu emhlabeni ukusukela kule minyaka ili-10 idlulileyo. Ezinye zeetoni ezingama-3200 zivelisiwe ngonyaka, ezilingana ngaphezulu kwe-16 yezigidi zeerandi ngokomndilili ngonyaka. Ezi clams ziye zathengisa ezinye iiflam, ii-slugs kunye neJapan.
Ezi zimbumbulu zifuna iimfuno ezithile zokutyala. Phakathi kwezi mfuno sifumana ukhathalelo olufanelekileyo lwemali. Ukuze ube nakho ukuqokelela ezi bivalve kakuhle kwaye banokuphuhlisa ngokuchanekileyo, kunyanzelekile susa ubulembu kuwo wonke umhlaba. Kuyimfuneko ukulawula onke amarhamncwa endalo anayo le mollusk.
Ukonyusa ioksijini ye-substrate kwaye iiflamu zinokufumana ioksijini yokuphefumla ngokulula, kusetyenziswa indlela esezantsi yokulima. Yindlela ekuhlwayelwa ngayo iisampulu zolutsha, zizitshintsha kubunzulu obahlukeneyo ukuze zibe nomjelo wamanzi olungileyo.
Xa iimbaza zikhula ziye kubungakanani obugqibeleleyo obuthathelwa ingqalelo kuthengiso, iimbaza zivunwa ngamagaba emveli okanye ngeeraki. Kukho iidolophu ezininzi ezona ndawo zinengeniso kuzo kukuthengisa iifreyim zikaloliwe. Ngokwayo, ayisiyiyo kuphela ngenxa yokuthengiswa kweeflams, kodwa ngenxa yokubaluleka kwabo kwinqanaba lenkcubeko kunye nelokhenketho kwaye ngenxa yokuthandwa kwabo konke. Ingathi ezi clams zaziziko lokutsala kuyo yonke idolophu kwaye uqoqosho lwayo lwajikeleza macala onke.
Ukulinywa kwembumba kaloliwe Iyaziwa kwihlabathi liphela ngenxa yencasa emnandi yazo. Sisenokuba sithetha ngeyona clams ityebileyo unokuze uyingcamle. Iipaki apho zikhule khona zikhuphisana kakhulu kwaye zidume ngokuba nemveliso ephezulu kunezinye iimbaza. Oku kungenxa yexabiso elifanelekileyo elinalo kwihlabathi liphela.
Ayisiyoyona clam intle kuphela emhlabeni malunga nokunambitheka kunye neyona ibiza kakhulu, kodwa ikwayiyo nentlanzi enomgangatho ophantsi kakhulu wamafutha akhoyo. Ke ineekhalori ezingama-47 kuphela kwiigram ezili-100 zeemveliso. Yenye yezilwanyana zaselwandle ezikhethwe kakhulu ngabantu abafuna ukuqhubeka nokonwabela incasa elungileyo nangona belandela ukutya.
Ikwanenani elikhulu lezimbiwa kunye neevithamini. Sidibana ngevithamini B3 kunye no-A kunye nezimbiwa zentsimbi, i-magnesium, i-potassium kunye ne-calcium. Zonke ezi vithamini kunye neeminerali zinceda ukongeza kwiimfuno zesondlo ukuze zibe sempilweni.
Ndiyathemba ukuba ngolu lwazi ungazazi ngcono ezi clams zingcono. Ngaba wakha weva ngazo ngaphambili?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » abanye » Iitreyini zikaloliwe